Reer Galbeedka: waxay ku habboon yihiin 700 qoraaladii Timbuktu: qarnigii 000aad, magaalada Timbuktu, Galbeedka Afrika, waxaa loo arkaayay inay tahay tan aduunka ugu qanisan, konton jeerna ka weyn magaalada Paris, waa in kabadan 115 oo degane
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 6, 2020 12: 12 No Comments
Hoogay, maanta Timobuktu waa kalabar dadka, 2500 jeer way ka yar tahay Paris wax muuqatana ma ahan magaalo casri ah. Xaaladaha nadaafadda ee aan la sharixi karin, tuugsanayayaasha iyo ...	Akhri wax dheeraad ah
Taliska Faransiiska miyey badbaadin karaan Afrika? Laba Faransiis ah oo loo qabtay argagixisada Islaamiga ah ee Maali, Faransiiska ayaa qatar ku ah Afrika "Kaliya dadka moronka ah waxay u maleynayaan in xukunka Faransiiska uu kujiro Afrika si loo badbaadiyo dadka madow / Afrikaanka" ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 20, 2020 7: 07 No Comments
Waa inaad doqon noqotaa inaad ku fikirto in Faransiiska uu yahay saaxiibka Afrika. Morons-yada kaliya ayaa u maleynaya inay ku sugan yihiin Afrika si ay ula dagaallamaan argagixisada. Kaliyeyaashu waxay u maleynayaan inay ...	Akhri wax dheeraad ah
Ha khaldin asxaabtaada ama cadawgaaga: dhamaan kuwa aad la dagaalameyso maahan cadawgaaga, sidoo kale dhamaan kuwa aad caawineyso maahan inay asxaabtaada yihiin "Waa inaad doqon noqotaa inaad ku fikirto in France ay tahay Saaxiibka Afrika ”… (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 20, 2020 4: 14 No Comments
Marka, waa inaad fahansan tahay inaadan khaladaad ku sameyn asxaabtaada ama cadaawayaashaada: cadowga, waa inaadan ku dhex gelin xitaa isbahaysiga ugu adag. "L ...	Akhri wax dheeraad ah
Fikradaha Dogons-ka: si fiican ayaan halkaas ugu joognay, ka hor intaanu fulin dilalka, khiyaanooyinka khiyaanada leh, oo iyagu naftooda u malaynaya dhakhaatiir
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 1, 2019 12: 12 No Comments
Sirius iyo digaagga - qarsoodiga meeraha ah "Dogons, Nommo wuxuu kaga tagay saddex muujinta falka": Ereyga koowaad wuxuu ahaa eray qoyan. Midda labaad fal fal ah	Akhri wax dheeraad ah
Sida laga soo xigtay, Jacques Attali: Madowga / Afrikaanka ayaa soo hindisay kumbuyuutarrada dhijitaalka ah muddo dheer ka hor intaan la helin "Fractals, aragtida xisaabta Afrikaanka - kumbuyuutarrada iyo nidaamka binary" Abuur madow / Afrikaan Afrika ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: September 8, 2019 12: 00 No Comments
Marka hore, maxaan ka hadlaynaa markaan nidhaahno jab? Jaantus jabka ama jajabku waa qaloocsan yahay ama aan kala-go 'lahayn ama go'an oo loo abuuray adoo raacaya xeerar gaar ah ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 25, 2019 12: 00 No Comments
Kuwa ugu badan, eber ee meeraha meeraha waa madow / Afrikaan, goorma bay dhererkooda taagnaan doonaan? Waa la gumaystaa, waa la kala gartaa, waa la xukumay, waa la dulmiyaa, waa la isku cadaadiyaa, waa la istcimaalaa, laakiin ma gartaan, mar horeba dhulka ayey ku jiraan, waa la xukumay “Goormaa la qaban doonaa? "
Eeg sida askar Maraykan ah ay ula ciyaarayaan abaarta carruurta ee Bariga Dhexe ... Waa xanuun, wadnaha ... (VIDEO)
Taytu Betul: waa muwaadin weyn oo Itoobiyaanka ah oo sheegay in ayan jirin gumeysi "Taytu Betul wuxuu ahaa xaaskii sadexaad ee Emperor Menelik II oo sidaas darteed Empress Ethiopia, waxa uu ahaa xaaskiisa, haweeney daacad ah, taliye iyo sharaf leh istiraatiiji militari »
Liiska kooxaha qowmiyadeed ee ugu weyn uguna awoodda badan qaaradda Afrika: waxaa lagu qiyaasaa in Afrika ay leedahay in kabadan 1 qowmiyadood, kooxo shaqsiyaad wadaaga isla dhaqan iyo taariikh taariikh, luqado, qiimayaal iyo wakiillo diimeed
Sharafta dhabta ah ee ragga ayaa lagu arki karaa wejigooda: waa laga arkaa meelo kale; waxa Afrika ku habboon. iyo taa bedelkeeda, wixii aan u qalmin ayaa loo qaddariyo inay mudan tahay "Waa arin ku aaddan ku xadgudubka qiyamka loogu talagalay dadka deggan dunida oo (dibedda uga baxa)"
Feb24 01: 13